योगेश भट्टराईले राजनीतिक जीवनकै कठिन दिन आज भन्दै लेख यस्तो कडा स्टाटस, सबैलाई भाबुक बनायो — Imandarmedia.com
योगेश भट्टराईले राजनीतिक जीवनकै कठिन दिन आज भन्दै लेख यस्तो कडा स्टाटस, सबैलाई भाबुक बनायो
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक जीवनकै कठिन दिन आज भएको बताएका छन् । एमालेको माधव पक्षका २६ सांसदले विपक्षी गठबन्धन नेता शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेपनि भट्टराईले भने गरेका थिएनन् ।
उनले एमाले एकता जोगाउन देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर नगरेको बताएका थिए । सोही प्रसंगलाई लिएर भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेका छन्, ‘मेरो राजनीतिक जीवन कै सबैभन्दा कठिन दिन आज ।
नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने आशाले मैले आजको निर्णय लिएको हुँ । सहि गरेंकी, गलत गरें इतिहासको कठोर मूल्याङ्कनमा खडा छु ।’
त्यस्तै सुनसरी क्षेत्र नम्वर १ बाट प्रतिनिधी सभा सदस्य एमाले नेता जय कुमार राईले पनि विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले हस्ताक्षर नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रपतिलाई चिट्ठी लेख्दै उनले आफ्नो पुरानो हस्ताक्षर दुरुपयोेग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘पार्टी अध्यक्ष विरुद्धमा विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी गरी कुनै हस्ताक्षर नगरेको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’ उनले पत्रमा लेखेका छन् । उक्त जानकारी उनले राष्ट्रपतिलाई गराएका छन् । एमाले सांसद् राईले भने,‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मैले हस्ताक्षर गरेको छैन्’
यस्तै सांसद राईले हामिसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै आफुले पत्र लेखेर हस्ताक्षर दुरुपयोग भएकोबारे जानकारी दिएको र उक्तचिट्ठी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाईसकेको बताएका छन् ।, ‘अन्य प्रयोजनमा गरिएको हस्ताक्षर यहाँ प्रयोग गरिएछ । कोरोनाले देश थलिएको बेला सरकार ढाल्ने र विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा कुनै हालतमा सहमती छैन्, हुँदैन् ।’ उनले भने ।
ओली पक्षले लफडा गर्न थालेको भन्दै माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव फायर
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सांसदको अधिकार प्रयोग गरेर हस्ताक्षरसहित आफूहरु आएको भन्दै केपी ओलीको दाबी सही नभएको राष्ट्रपतिसँग बताएका छन् ।
१४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री दाबी गरिएको पत्र लिएर पुगेका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा ओलीको पनि दाबी आएको बताएकि थिइन् । त्यसलगत्तै नेता नेपाल र अध्यक्ष यादवले आफूहरु हस्ताक्षरसहित आएको भन्दै ओलीको दाबी सही नभएको बताएका थिए ।
‘हामीले ७६(५) अनुसार आएका छौं । प्रधानमन्त्रीको दाबी कसरी सही हुन सक्छ ? हामी यही त छौं । ७६(५) अन्तर्गत सांसदहरुले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारअनुसार हामीले हस्ताक्षर गरेका छौं,’ नेपालको भनाइ उद्र्धत गर्दै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।
अध्यक्ष यादवले पनि आफू हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा नै आएको भन्दै ओलीको दाबी सही नभएको बताएका थिए । ‘म यही छु । महेन्द्र यादव पनि यहीं हुनुहुन्छ । अरु सांसदहरु पनि बाहिर हुनुहुन्छ । अनि कसरी ओलीको दाबी सही हुन्छ ?’ यादवले राष्ट्रपतिसमक्ष भनेका थिए । ‘राष्ट्रपति त्यसको जवाफ दिनुभएन । कानुन हेर्छु भन्नुभयो,’ श्रेष्ठले भने ।
बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षी दलका नेताहरु राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नुअघि प्रधानमन्त्री ओली पुगेका थिए । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका ओलीले एमालेको १२१ र ३२ सांसद रहेको जसपाको समर्थन आफूलाई रहेको पत्र बुझाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिद्वारा आपतकाल लगाउन सक्ने एक अध्यादेश जारी, त्यसो भए अब के हुन्छ ?
देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने समाचारले नेपालका नागरिक चनाखो भइरहेका बेला राष्ट्रपति बिद्यदेबी भण्डारीले सरकारले सिफारिस गरेको आपतकालीन अध्यादेश जारी गरेकी छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भएको अवस्थामा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्थासहित सरकारले ल्याएको अध्यादेश उनले जारी गरेकी हुन् ।
यस्तै सरकारले सपथ लिन औपचारिक पोशाकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सपथसम्बन्धी अध्यादेशमा सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले सपथ लिँदा वा सपथ गराउँदा नेपाल सरकारले तोकेको औपचारिक पोशाकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
यद्यपी आफ्नो संस्कृति र परम्परा वा पहिचान झल्किने मर्यादित भेषभूषा वा पोशाक लगाएर सपथ लिन सकिने अध्यादेशमा व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिँदा ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने शब्द भन्न अस्वीकार गरेका थिए। ‌ओलीको सपथ विवादमा परेपछि सरकारले सपथसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको हो।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा सपथको ढाँचा समावेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले भन्न अस्वीकार गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने नयाँ सपथको ढाँचामा हटाइएको छ। त्यस्तै, अध्यादेशमा सरकारले ईश्वरको वा देश र जनताको भन्ने शब्दमध्ये एउटा कुन शब्द प्रयोग गर्ने हो भन्ने विषय सपथ अघि नै जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।